Goolhaye Hugo Lloris Oo Labo Arrimood Kula Taliyay Pogba Si Uu Uga Baxo Dhibaatada Man Utd Ku Haysata %
Goolhayaha kooxda kubada cagta Tottenham iyo qaranka Faransiiska wiilka lagu magacaabo Hugo Lloris, ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay in Paul Pogba, uu kamid yahay kuwa aduunka ugu fiican, inkastoo uu yahay mid dhibaato ku haysata Los Blancos.
Pogba ayaa wuxuu ahaa mid aanan kusoo bilaaban shaxda koowaad ee kooxda kubada cagta Manchester United, saddexdii kulan ee ugu dambeysay ee uu ka dheelay dhamaan tartamada oo dhan, iyadoona tani loo aaneeyay inuu dhaawacyo kasoo laabtay.
Laakiin, Pogba inuu keydka ugu soo bilowdo Man United kama aysan celin inuu kamid noqon waayo 25 ciyaaryahan ee qarankiisa Faransiiska, iyadoona Lloris oo ah Kabtanka dalkiisa uu sheegayo in laacibkaan dib u heli doono muuqaal ciyaareedkiisa.
“Paul, wali waa uu kamid yahay ciyaartoyda ugu fiican aduunka, wuxuuna dib ugu soo laaban doonaa kulamada uu France udheeli doono muuqaal ciyaareedkiisii ugu fiicnaa,” ayuu Goolhaye Hugo Lloris, usheegay warbaahinta.
“Si uu dib uhelo muuqaal ciyaareedkiisa fiican wuxuu ubaahan yahay in uusan niyad jabin iyo inuu mar walba shaqo adag qabto maxaa yeelay waxaan ogahay in uusan quusan wali,” ayuu hadalkiisa kusoo daray, Shabaq-illaaliyaha Spurs.
“Isaga waa mid og waajibaadka laga rabo marka uu garoonka ku jiro, sidaas darteeda waxaan rajeynayaa in mudada uu udheelayo Faransiiska uu kasoo kaban doono wax walba oo uu horey usoo dhacay,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Hugo Lloris.
Hugo LlorisMan UnitedPogbaTottenham